Ukukhutshwa komthetho | Isiseko soMvuzo - Uthando, ubulili kunye ne-Intanethi
Ikhaya Resources Umyalelo Wokugweba Umthetho
Eli phepha liyi-disclaimer yomthetho we-Reward Foundation. Le website iqulethe ulwazi olubanzi malunga nemicimbi yomthetho. Ulwazi aluyiluleko, kwaye akufanele luphathwe njengolu hlobo.
Ulwazi olusemthethweni kweli bhsayithi lunikezelwa "njengokuba" ngaphandle kweempawu okanye iziqinisekiso, zivakalisa okanye zichazwe. IsiSeko soMvuzo asizange senze iziphakamiso okanye iziqinisekiso ngokumalunga nolwazi olusemthethweni kule website.
Ngaphandle kokuchasana nobukhulu besigaba esilandelayo, iSiseko soMvuzo asivumelekanga ukuba:
• Ulwazi olusemthethweni kule website luya kufumaneka rhoqo, okanye lufumaneke kukho konke; okanye
• Ulwazi olusemthethweni kule website luphelele, luyinyani, luchanekile, lufikeleleke kumhla, okanye alukhohlisi.
Ukusetyenziswa kweeNkonzo kunye neWebhusayithi
Ngokuqinisekileyo uyavuma kwaye uyavuma ukuba:
Ukusetyenziswa kweeNkonzo kunye neeWebhusayithi kumngcipheko wakho kuphela. Isiseko soMvuzo senze konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuba umxholo okwiWebhusayithi (ii) kwaye wenziwe wafumaneka ngeeNkonzo zichanekile kwaye zihlaziyiwe kwaye zichanekile ngexesha lokupapashwa. Nangona kunjalo, iiWebhusayithi (ii) kunye neeNkonzo zibonelelwa 'njengoko kunjalo' kwaye 'njengoko zifumaneka'. Asikuqinisekisi ukuchaneka, ixesha elifanelekileyo, ukugqibelela okanye ukufaneleka kwinjongo yomxholo obonelelwe kwiWebhusayithi (okanye) kwiiNkonzo okanye ukusetyenziswa kweWebhusayithi (ii) akunakuphazanyiswa, kungabikho ntsholongwane okanye kungabikho mpazamo. Akukho xanduva lwamkelweyo okanye egameni leSiseko soMvuzo ngazo naziphi na iimpazamo, ukushiya okanye ulwazi olungachanekanga kwiWebhusayithi okanye kwiiNkonzo.
Nawuphi na umbandela okhutshelweyo okanye ofunyenwe ngenye indlela kusetyenziswa iiNkonzo wenziwa ngokokubona kwakho kunye nomngcipheko kwaye uya kuba noxanduva lwakho kuphela kuwo nawuphi na umonakalo kwikhompyuter yakho okanye ukulahleka kwedatha okubangelwa kukukhutshelwa kwayo nayiphi na into enjalo.
Akukho ngcebiso okanye lwazi, nokuba kungomlomo okanye kubhaliwe, olufunyenwe nguwe kwiSiseko soMvuzo siya kudala nasiphi na isiqinisekiso okanye olunye uxanduva olungachazwanga ngokucacileyo kule Migaqo neMiqathango.
Uxanduva lweSiseko soMvuzo kuwe kwisivumelwano, ukukhohlisa, (kubandakanya ukungakhathali) ngokubhekisele kule Migaqo neMiqathango, ukusetyenziswa kweWebhusayithi (ii) kunye / okanye naziphi na iiNkonzo ziya kuncitshiswa kwi (a) £ 150.00 kunye ( b) ixabiso elihlawulwe ngokufanelekileyo kwi-Reward Foundation phantsi kwayo nayiphi na ikhontrakthi yeenkonzo ezihlawulelweyo kwiinyanga ezintathu eziphambi komsitho obangela ibango.
Uyavuma ngokucacileyo kwaye uyavuma ukuba iSiseko soMvuzo asisayi kuba luxanduva lwayo nayiphi na indlela engathanga ngqo, eyenzekileyo, ekhethekileyo, eyomfuziselo okanye yomonakalo ongumzekelo, okanye ilahleko ethe ngqo okanye engathanga ngqo yenzuzo, ingeniso, ishishini, ulondolozo olulindelweyo, ukulunga okanye ithuba.
Akukho nto kule Migaqo neMiqathango eya kuchaphazela amalungelo asemthethweni kuye nawuphi na umthengi okanye ikhuphele ngaphandle okanye ithintele naluphi na uxanduva ngobuqhetseba okanye ukufa okanye ukwenzakala komntu okuvela ngenxa yokungakhathali kweReward Foundation.
Uncedo lo bugcisa
Umxholo okwiWebhusayithi (s) kwaye wenziwe ukuba ufumaneke ngeeNkonzo ngowolwazi ngokubanzi kwaye akujoliswanga kuwo, kwaye awunabungqina, ukwenza iingcebiso zomthetho okanye ezinye iingcali okanye iinkonzo okanye isindululo sokuthenga nayiphi na imveliso okanye inkonzo apho kufuneka kuthathwe isigqibo esithile. Ulwazi, umxholo weWebhusayithi kunye neeNkonzo azijongani neemeko zakho kwaye ngenxa yoko akufuneki uxhomekeke kumxholo weWebhusayithi (ii) kunye neeNkonzo njengendawo endaweni yengcebiso ezifanelekileyo.
Isiseko soMvuzo asinoxanduva lokuba umxholo kwiWebhusayithi okanye kwiiNkonzo usetyenziswa njani, utolikwa njani okanye kubekwa phi ukuthembela kuwo. Asamkeli naluphi na uxanduva ngeziphumo zalo naliphi na inyathelo elithathiweyo ngokwesiseko solwazi olunikezwe kwiWebhusayithi (okanye) okanye olufumaneka kwiiNkonzo.
Akumelwe uthembele kwingcaciso kule website njengezinye iinkcukacha zomthetho ezivela kuMceli wakho, uMmeli, uBharterter, ummeli okanye omnye umboneleli weenkonzo zomthetho.
Ukuba unemibuzo ethile malunga nayiphi na into esemthethweni kufuneka ubonisane noMceli wakho, uMmeli, uBharterter, ummeli okanye omnye umnikezeli weenkonzo zomthetho.
Awufanele unqabile ukufuna iingcebiso zomthetho, ukungayithobeli isiluleko somthetho, okanye uqale okanye unqande nasiphi na isenzo somthetho ngenxa yolwazi kule website.
Akukho nto kule migaqo-mvume yokusemthethweni iyakunciphisa nayiphi na amatyala ethu nayiphi na indlela engavunyelwe phantsi komthetho ofanelekileyo, okanye ukukhuphela nayiphi na amatyala ethu angabandakanywa phantsi komthetho osebenzayo.
Iziganeko ezingaphandle kolawulo lwethu.
Eli gatya licacisa ukuba asiloxanduva lweziganeko ezingaphaya kolawulo lwethu.
Isiseko soMvuzo asizukubekwa tyala okanye uxanduva kuko nakuphi na ukusilela ukwenza, okanye ukulibaziseka ekusebenzeni kwayo, naziphi na izibophelelo zethu phantsi kwale Migaqo neMiqathango okanye nasiphi na isivumelwano esimalunga nathi esiphakathi kwethu esibangelwa ziziganeko ezingaphandle kolawulo lwethu ("Force Majeure" ).
Umnyhadala we-Force Majeure ubandakanya nasiphi na isenzo, isiganeko, esingenzekanga, ukushiyeka okanye ingozi engaphaya kolawulo lwethu olufanelekileyo kwaye kubandakanya ikakhulu (ngaphandle komda) oku kulandelayo:
Uqhankqalazo, ukutshixa ngaphandle kunye nezinye iintshukumo zoshishino.
Uqhushululu lwasekhaya, uqhushululu, uhlaselo lwabanqolobi okanye isoyikiso sokuhlasela kwabanqolobi, imfazwe (nokuba ibhengeziwe okanye akunjalo) okanye isoyikiso okanye ulungiselele imfazwe.
Umlilo, ukuqhuma, uqhwithela, izikhukula, inyikima, ukuthomalalisa, ubhubhane okanye enye intlekele yendalo.
Ukungabinakho ukusetyenziswa koololiwe, ukuhambisa ngenqanawa, iinqwelomoya, ukuthuthwa kweemoto okanye ezinye iindlela zothutho loluntu okanye zabucala.
Akunakwenzeka ukuba kusetyenziswe uthungelwano lonxibelelwano lukarhulumente okanye lwabucala.